Eto i Kristy! - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Fiainana miaraka amin'Andriamanitra > Kristy dia eto!
Ny iray amin'ireo tantara tiako indrindra dia avy amin'ny mpanoratra rosianina malaza Leo Tolstoy. Nanoratra momba ny mpamono mpivaro-tena iray antsoina hoe Martin izy, indray alina izay nanonofy fa hitsidika ny atrikasa i Kristy ny ampitson'iny. Tena nampihetsi-po an'i Martin ary te hahazo toky fa tsy ho toa ilay Fariseo izay tsy niarahaba an'i Jesosy teo am-baravarana. Ka nifoha alohan'ny maraina, nahandro lasopy, ary nanomboka nijery tsara ny arabe izy teo am-panaovana ny asany. Naniry izy ho vonona rehefa tonga i Jesosy.
Fotoana fohy taorian'ny niposahan'ny masoandro dia nahita miaramila nisotro ronono izy. Rehefa nametraka ilay sinina mba hialana sy hanomezana hafanana ilay veterana taloha, nahatsapa alahelo azy i Martin ary nanasa azy hipetraka eo am-patana sy hisotro dite mafana. Nolazain'i Martin tamin'ilay miaramila ny nofy azony omaly alina sy ny nahitany ny fampiononana tamin'ny famakiana ireo evanjely taorian'ny nahafatesan'ny zanany lahy. Taorian'ny kaopy dite maromaro ary taorian'ny nandrenesany tantara maro momba ny hatsaram-pon'i Jesosy tamin'ny olona izay faran'izay ambany indrindra amin'ny fiainana, dia nandao ny atrikasa izy ary nisaotra an'i Martin tamin'ny famelomana ny vatany sy ny fanahiny.
Rehefa maraina, nisy vehivavy tsy nanao fitafiana tsy nijanona teo anoloan'ilay atrikasa mba hahafahana manangona ilay zaza mitomany. Nivoaka tany ivelany i Martin ary nanasa ilay vehivavy hiditra mba hahafahany mikarakara ilay zaza eo akaikin'ny lafaoro. Rehefa fantany fa tsy manan-kohanina izy, dia nomeny azy ny lasopy efa nomaniny, miaraka amin'ny palitao sy vola vola amin'ny shawl.
Nisy tolakandro, nijanona niaraka tamin'ny paoma sisa teo am-paosiny teny ampitan'ny arabe ny vehivavy tranainy iray. Nitondra kitapo mavesatra izy, ary nisy sarina hazo teo an-tsorony. Rehefa nandanjalanja ny harona teo amin'ny lahatsoratra iray izy mba hanakodia ilay harona teo an-damosiny, dia nisy zazalahy iray misy satroka fehikibo nitazona paoma ary niezaka nandositra. Nisambotra azy ilay ramatoa, nanandrana nandrora azy ary nitarika azy tany amin'ny polisy, fa i Martin kosa nihazakazaka nivoaka ny toeram-piarovany ary nangataka azy mba hamela ilay zaza. Rehefa nanohitra ilay vehivavy dia nampahatsiahy an'i Martin ny fanoharan'i Jesosy momba ilay mpanompo izay navelan'ny tompony trosa lehibe, fa avy eo dia lasa naka ny trosa tamy ny trosa. Nataony miala tsiny ny ankizilahy. Tokony havelantsika ny mamela ny olon-drehetra, indrindra ny tsy misaina, hoy i Martin. Mety izany, nitaraina ireo tovolahy lahy ireo izay efa tonga voaloto sahady. Avy eo aminay, ny zokiolona, ​​ny hampianatra azy ireo tsara kokoa, hoy ny navalin'i Martin. Nanaiky ilay vehivavy ary nanomboka niresaka ny zafikeliny. Avy eo dia nijery ilay mpanao ratsy izy ary niteny hoe: "Andriamanitra hiaraka aminy." Nony nitondra ny gony hody izy, dia nihazakazaka nandroso ilay zazalahy ary niteny hoe: "tsia, avelao aho hitondra." Nijery azy ireo nandeha an-dalambe i Martin ary niverina niverina niasa. Vetivety dia nanjary maizina izy io, ka nandrehitra jiro izy, napetany ny fitaovana ampiasainy ary nanadio ilay atrikasa. Rehefa nipetraka teo am-pamakiana ny Testamenta Vaovao izy dia nahita tarehimarika tamin'ny zoro maizina sy feo izay niteny hoe: "Martin, Martin, tsy fantatrareo ve aho?" "Iza ianao?", Hoy i Martin.
Amiko izany, ilay feo nibitsibitsika, indro, io aho. Nipoitra avy teo amin'ny zoro ny miaramila taloha. Nitsiky izy dia lasa teo.
Amiko io, ilay feo nibitsibitsika ihany koa. Nivoaka avy teo amin'ny zoron-trano mitovy ilay vehivavy sy ny zanany. Nitsiky izy ireo ka lasa.
Izaho io! Ny feo dia nibitsibitsika indray, ary ilay tovolahy sy ilay tovolahy nangalatra paoma dia nivoaka tamin'ny zoro. Nitsiky izy ireo ary nanjavona toy ny hafa.
Faly be i Martin. Niara-nipetraka tamin'ny Testamenta Vaovao izy, izay nisokatra irery. Namaky teny an-tampon'ny pejy izy:
“Satria noana Aho ka nomenareo hanina. nangetaheta Aho, dia nomenareo hosotroina; Nivahiny Aho, dia nampiantranoinareo.” “Na inona na inona nataonareo tamin’ny anankiray amin’ireto rahalahiko kely indrindra ireto, dia nataonareo tamiko izany” (Matio 2.5,35 ary 40).
Inona tokoa moa no kristiana noho ny fanehoana hatsaram-panahy sy hatsaram-panahy amin'ireo manodidina antsika? Tahaka ny nitiavan'i Jesosy antsika sy ny nanolorany antsika dia mitaona antsika amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina ho amin'ny fifaliany sy ny fitiavany ny fiainany amin'ny Ray Izy ary manome hery antsika hizara ny fitiavany amin'ny hafa.